Hiran State - News: HS:- Soomaaliya oo yeelaneysa xukumadii uguhoreysay oo rasmi ah.
HS:- Soomaaliya oo yeelaneysa xukumadii uguhoreysay oo rasmi ah.
HS:- Magaalada Mogdishu waxaa ka socda dhaqdhaqaaqii ugu danbeeyey oo lagu soo dhisayo xukumadii ugu horeysay ee rasmi ah oo wadanka ka hana qaada mudo 21 sano ah. warar leysku haleyn karo oo naga soo gaaraya magaalada Mogdishu ayaa sheegaya in ay gabo gabo mareyso dhismaha xukumada cusub amaba golaha cusub ee wasiirada.
Xukumada cusub ayaa ah mid wax badan ka duwan kuwii hore marka la eego qaabka ay howlahu u socdaan.inkasta oo aanu dooneyn in aanu ka hor dhacno arimo badan inta laga soo dhisayo xukumada hadane golaha cusub ee wasiirada tiro ahaan iyo tayo ahaan waxey wax badan ka duwan yahiin xukumadahii kumeel gaarka ahaa ee dalka Soo maray oo ahaa kuwo aan aduunyada laga ictiraafsaneyn mudadii ay jireen kuwaasi oo qilaaf iyo musuq maasuq hareeyey.
Golaha cusub ee wasiirada ayaa dhamaantood ah wajiyo cusub waxaana u badan baa la leeyahay shaqsiyaad aad xog ogaal uga ahaa waxii dalka ka dhacay halkii ay waayadii danbe xukumadahii dalka soo maray u badnaayeen qurbo joog hantidoon ahaa.
Madaxweynaha Jamhuuriyada, gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirka 1aad ayaa qorsheynaya in xukumada cusub ay noqon doonto mid lala xisaabtami doono si looga hortago musuq maasuq iyo wax is daba marsiin.shacabka Soomaaliyeed oo u ooman dowladnimo taam ah iney ka hana qaado dalkooda ayaa iyagu u muuqda kuwo aan kala jecelyn cida ka mid noqoneysa amaba wasiir ka noqoneysa golaha wasiirada cusub waxaa muhiim u ah oo kaliya dowlad shaqeysa oo dalka dib u dhista shacabka ku dhiban dibadahane dib u soo celisa.
Tani waxey dhiragalin weyn u tahay madaxda qaranka oo hadii ay xitaa dhamaan golaha wasiirada ka dhigaan saaxiibadood marba hadii ay waajibaadkooda shaqo u gudanayaan sidii la rabay aan wax dhib ah lagu qabin maadaama uu dalku ka baxay kumeel gaarkii ayna sii dhamaneyso waqtigii adkaa ee fowdada iyo kooxeysiga maadaama 4 sano kadib looga gudbayo nidaamka 4.5 habka xisbiyada oo ay shacabku soo dooranayaan cidii ay rabaan amaba xisbigii ay doonayaan inuu hogaamiyo.
Dhinacaas iyo gobolada dalka.
Inkasta oo maalmahii la soo dhaafay guud ahaan dalka Soomaaliya ay ka socdeen dabaal dagyada ciida Adxa hadane waa lama huraan in meelo badan wax laga iftiimiyo sida J/ hoose iyo kooxda Raaskaambooni. Kooxda Raaskaambooni ee uu hogaaminayo Ahmed Madoobe ayaa maalmahii tagay bilaabay iney wax badan ka bedelaan siyaasadooda ku wajahan J/hoose iyagoo dhamaanba joojiyey wararkii iskugu jiray hanjabaada iyo awood sheegashada kadib markii ay cadaadis xoogan kala kulmeen dowlada Kenya oo loo maleynayo iney fulineyso fariimo kaka yimid dowlada federalka oo sida muuqata ka hortageysa in ay wadanka ka howl galaan kooxo diimeedyo amaba magacyo urur.
Warar xaqiiqda u dhaw oo naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in maamul u sameynta J/hoose iyo gobolo badan oo dalka ka mid ah shacabka loo madax banaaneyn doono iney iyagu maamul ay raali iskaka yahiin dhistaan dowladana ay fududeyneyso qaabka uu u dhacayo wada hadalka iyo shirarka. Kooxda Raaskaambooni oo aaminsanaa hadii iyagoo wata hubka ay siisay dowlada kenya hal qabiil oo kaliyana ah iney wax badan uga hagaagayaan magaalada kismaayo, xaaladu hada sidey moodayeen ma ahan siyaasada rasmigaa iyo habka maamul u sameyntana waxey u muuqataa iney iskugu biyo shubaneyso madaxda qaranka hadii uu fashil ku yimaado in ay shacabku soo dhistaan maamulkii ay rabaan.
Maxaa dhici kara hadii kooxda Raaskaambooni ay awood is bidaan inta uu gacantooda ku jiro hubka ay ka heleen dowlada kenya kuna sugan yahiin magaalada Kismaayo?
Hadii ay is bidaan awood sheegasho kuna socdaan hadaladii qalafsanaa ee ay ku dhaqmi jireen saraakiishooda ee u muuqday isir naceybka iyo qabiileysiga waxey mari doonaan meeshii ay mareen kooxahii iyaga ka horeeyey sida USC, Gen Moorgan, walaalahii Galgaduud ee Dooxada juba iyo ugu danbeyn kooxdii Shabaab ee magaalada laga saaray dhawaan.
Hadiise ay arinta ku saleeyaan maxaa inoo dan ah hadaanu nahay shacabka Jubooyinka oo maamul loo dhan yahay la wada dhisan oo waliba maamulkaas sida loogu kala badan yahay degaanka loo kala qaadan jagooyinka ugu muhiimsan 6 bilood ka badan kooxda Raaskaambooni ma sii jiri doonto oo si la yaab leh ayay gacantooda uga bixi doontaa meelaha ay hada kaka sugan yahiin Jubooyinka.
Marka dib loo eego dagaaladii sokeeye waa la waayay dagaal ay hor boodeyso koox gaar ah oo lagu najaxay maadaama waxkasta lagu saleeyo dano qabiil iyo wax la mid ah.
Isku soo duuboo isbedelka cusub ee dalka ka dhacay xukuamda cusub ma uga faa'ideyn doontaa shacabkeeda iyadoo waxkasta lagu saleynayo rabitaanka shacabka.
· admin on October 29 2012 17:07:44 · 0 Comments · 1693 Reads ·
14,934,453 unique visits